SEKRIMA : Mila apetraka ny Filankevitra sosialy sy toekarena eto Madagasikara
Tsy mitsahatra mihemotra sy mahantra i Madagasikara na dia eo aza ireo harena be misy eto amin’ny Firenena. 11 janvier 2017
Ho an’iny taona lasa iny, betsaka ny tsy fanajan-dalana eo amin’ny sehatry ny asa, ny fanitsakitsahana ny zon’ny mpiasa sy ny tsy fanajana ny zo sendikaly.
Ireo no fanambaràna nataon’ny Sendikan’ny Mpiasa Kristianina eto Madagasikara na Sekrima, tarihin’i Rémi Aboudouti nivoaka ny alarobia lasa teo. Notsindriany tamin’izany fa tokony hametraka sy hanome vahana hatrany ny fifampiresahana eny anivon’ny orinasa ireo orinasa sasany misy eto Madagasikara. Ny Fanjakana ihany koa hanome sehatra ny fifampiresahana amin’ireo sendika sy ny vondron-kery samihafa hisian’ny filaminana sy ny fitoniana.
Ho an’ity sendika ity koa tokony hapetraka ny Filankevitra Ambony misahana ny sosialy sy ny toekarena hiara-hiasa ary hanapa-kevitra amin’ny governemanta amin’ny fanatanterahana ny asa fampandrosoana eto Madagasikara. Io Andrim-panjakana io dia voasoratra ao amin’ny lalàm-panorenana ny fametrahana azy saingy tsy maharototra ny Fanjakana ny fametrahana izany toy ny Fitsarana misahana ny fitsarana ireo olom-panjakana ambony na Hcj.
Fotoana fandraisana andraikitra sy fanaovana asa misy akony eny amin’ny vahoaka tena miaina ao anatin’ny fahantrana tanteraka izao raha ny nambaran’ny Sekrima ihany. Manana olona maro azo ampiasaina sy akora fototra betsaka i Madagasikara ka tokony trandrahina izany. Hatramin’izay, fanombohana miarina hatrany ny an’
i Madagasikara ka mila manova fomba fiasa ny mpitondra, araka ny soson-kevitry ny Sekrima ihany.
Sokafana ny fifanakalozan-kevitra ary ampandraisina anjara ny vondron-kery samihafa sy isan-tokony fa tsy avela hitangorona ny fanapahan-kevitra sy ny fandraisana andraikitra.